Shayela Ukusekelwa 86 + 18008724076
Ukusekelwa kwe-imeyili design2020@vip.163.com
Umklamo Wokudweba Iphrojekthi
Steel Sakhiwo System
Isigaba sesitshalo sokukhiqiza izimboni
Isigaba sokwakhiwa kolwelwesi
Uzimele weNet, Isigaba Sokwakheka Kobungqingili
Ukwakha uhlelo lwamanzi nogesi
Steel Uzimele Class
Uhlelo lokwakha isakhiwo
Ingxenye Yokukhiqiza Indawo Yemboni
Ukwethulwa kancane kwemishini: Izici zobuchwepheshe kanye nokuqamba okusha: I-SKHZ-B yokulawulwa kwamanani umshini womhlangano we-H-beam 1. Indlela yokukhiqiza yokushisela i-H-beam ukubeka i-H-beam ngokuya kwesimo se- "I", futhi i-weld two seams seams ezinhlangothini zombili ngasikhathi sinye, ngaleyo ndlela kukhulisa kakhulu ukusebenza kahle kwe-welding. Ngenxa yokushisela okulinganayo, ipuleti lewebhu ngokuyisisekelo alikhubazi ngemuva kokushisela. 2. Umshini wokuqondisa umshini we-H-beam flange straightener ...
Isicelo somkhiqizo wenkampani
Isicelo somkhiqizo weNkampani Izici zesakhiwo sensimbi: 1. Amandla aphathekayo aphezulu nesisindo esincane Insimbi inamandla amakhulu kanye ne-modulus nokunwebeka. Uma kuqhathaniswa nokhonkolo nokhuni, isilinganiso samandla okuveza amandla siphansi uma kuqhathaniswa, ngakho-ke ngaphansi kwezimo ezifanayo zokuxineka, isigaba selungu sokwakhiwa kwensimbi sincane, isisindo esifile silula, ukuthuthwa nokufakwa kulula, futhi isakhiwo sensimbi ilungele izakhiwo ezinesikhala esikhulu, ukuphakama okuphezulu kanye ne-loa esindayo ...
Isingeniso Ukuqinisa ukuqondiswa nokulawulwa komnyango onekhono wokuhlela emadolobheni nasezindaweni zasemakhaya ekusetshenzisweni komhlaba ongaphansi kukahulumeni nemisebenzi ehlukahlukene yokwakha kusiza ekuqhakambiseni ukusetshenziswa komhlaba kanye namaphrojekthi wokwakha ahlukahlukene ukuhambisana nezinhloso zentuthuko nezidingo eziyisisekelo ezibekiwe uhlelo, ngaleyo ndlela lunikeza isiqinisekiso sokufezeka kokuhlelwa kwezindawo zasemadolobheni nezasemakhaya, ukwakheka okunengqondo, ukongiwa komhlaba, intuthuko eqinile neqhubekayo Uhlelo ...
Isingeniso Kubandakanya ukwakhiwa kwamanzi (ukwakha ukwakhiwa kwamanzi kanye nomdwebo wokwakhiwa kwamapayipi) nokwakhiwa kukagesi (ukwakha umdwebo wokwakhiwa kagesi), ngokuhlangene obizwa ngokuthi umdwebo wokwakhiwa kwamanzi nogesi. Ukwakha umdwebo wokwakhiwa kokuhlinzekwa kwamanzi kanye namapayipi kungenye yezingxenye zephrojekthi eyodwa kuphrojekthi yobunjiniyela. Kuyisisekelo esiyinhloko sokunquma izindleko zephrojekthi nokuhlela ukwakhiwa, futhi kubalulekile ...
Isingeniso Amayunithi ayisisekelo akha igridi ayisigaxa esingunxantathu, i-prism engunxantathu, i-cube, i-quadrangle enqunyiwe, njll. Lezi zingxenye eziyisisekelo zingahlanganiswa zibe ama-trigons, ama-quadrilateral, ama-hexagoni, imibuthano noma esinye isimo esise-planar shape. Inezinzuzo zokucindezeleka kwesikhala, isisindo esincane, ukuqina okukhulu, ukusebenza kahle kokuzamazama komhlaba, njll.Ingasetshenziswa njengophahla lwejimu yokuzivocavoca, i-cinema, ihholo lombukiso, ihholo lokulinda, inkundla yokuma isiteji, i-hangar, igridi yekholomu enezindlela ezimbili isakhiwo kanye ...
Isingeniso Isakhiwo se-Membrane siyinhlanganisela yokwakhiwa nokwakheka. Luhlobo lwesakhiwo oluncane olusebenzisa okokusebenza okunamandla okuqina okuguquguqukayo nezakhiwo ezisizayo ukukhiqiza ukucindezeleka okuthile okwenziwe ngaphakathi ngaphakathi kwabo ngendlela ethile futhi kwakha isimo esithile sendawo ngaphansi kokulawulwa kwengcindezi, esisetshenziswa njengesakhiwo sokumboza noma ukwakha umzimba omkhulu futhi inokuqina okuqinile ukumelana nomthwalo wangaphandle. Ulwelwesi isakhiwo siphula imodi yomsuka oqondile womugqa oqondile ...
Isingeniso Uhlaka lwensimbi luyisakhiwo esenziwe ngensimbi futhi lungenye yezinhlobo eziyinhloko zezakhiwo zokwakha. Isakhiwo sinamandla amakhulu, isisindo esilula nokuqina okuphezulu, ngakho-ke kufanelekile ikakhulukazi ekwakheni izakhiwo ezinkulu zesikhala esikhulu, eziphezulu kakhulu nezisindayo. Izinto zinokuhlobana okuhle ne-isotropy, kungokomzimba ofanelekile wokunwebeka, futhi kuhambisana kakhulu nemibono eyisisekelo yemishini ejwayelekile yobunjiniyela. Indaba inepulasitiki enhle nobulukhuni, ingakwazi ...
Isingeniso Imboni yezimboni isho zonke izinhlobo zezindlu ezisetshenziselwa ngqo ukukhiqiza noma ukuxhasa ukukhiqizwa, kufaka phakathi imihlangano yokufundisana emikhulu, izindlu ezisizayo kanye nezinsiza ezisizayo. Zonke izitshalo ezimbonini, ezokuthutha, ezentengiselwano, ezokwakha, ezocwaningo lwesayensi, ezikoleni nakwezinye izingxenye zizofakwa. Ngaphezu kweshabhu elisetshenziselwa ukukhiqiza, imboni yezimboni ifaka nezakhiwo zayo ezisizayo. Izitshalo zezimboni zingahlukaniswa zibe isitezi esisodwa sezimboni ...
I-China Zhenyuan Steel Structure Engineering CO., LTD ingusonkontileka wohlaka lwensimbi ohlanganisa ukwakhiwa, ukwenziwa nokufakwa.
Ikheli: ITianjin neYunnan, eChina
Ucingo: 86 + 18008724076
Imininingwane: UMnu Lin
Amahora okusebenza (isikhathi saseBeijing): 8:30 ~ 18:30